Ogaden News Agency (ONA) – Wafti Heersare ah oo kabaxay Wadanka UK oo kaqeyb gali doona shirweynaha OYSU
Posted by ONA Admin	/ May 21, 2013
Waxaa eega ka duulay magaalada London wafti heersare ah oo kasocda Ururka dhalinyarada OYSU UK. Waftigaas oo u kicitamay dhinaca qaarada America oo uu ka furmayo shirweynihii OYSU heer caalami magaalada San Diego maalinta bari ah 22/05/2013 illaa 27.05.2013.
Waftigan ayaa waxaa hoggaaminaya Mudane Cabdi Casiis oo ah xubinka matalaya soona jeedin doona qudbada OYSU-London ku leedahay madasha shirkaas.
Taariikh Kooban OYSU UK:
Ururka dhalinyarada somalida Ogadeniya ee UK waxaa markii u horeysay lagu asaasay magaalada London maalin Sabti ah taariikhduna ku beegneed 10 September 2005. 3 (saddex) xubnood oo kamid ah Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee magaalada London ayuu ku bilowday waxaana kusoo biiray todobaadkii u horeysay ururkaas xubnihii ugu firfircoona ururka dhalinyarada ee illaa eega soomaray xubnahaas oo u badnaa 60 % gabdho waxay dajiyeen ahdaafta iyo Vissionka dhalinyarada somalida Ogadeniya ee illaa maanta lagu howlgalo.
Ururkan dhalinyaro oo ahaa ururkii ugu horeeyay ee dhalinyaro oo si caam ah loogu dhawaaqo looguna tixgaliyay inay yihiin ururka dhalinyarada Somalida Ogadeniya shaqadiisii ugu horeysay ee uu qabto waxuu bilaabay 12 September 2005 isaga oo furey golihii ugu horeeyay ee dhalinyaro isugu timaado isaga oo ka furay khadka internetka yahoo groups si xubnaha cusub ee ururuka loo diwaan galiyo.
Ogaden Students Forum
Golahaas waxaa lagu furay magaca ururka oo ahaa Golaha ururka dhalinyarta iyo ardeyda Ogadeniya (Ogaden Students Forum). golahan waxa uu u horseeday in lagu soo bandhigo fikradaha kala gadisan ee xubnaha ururka dhalinyarada iyada oo si cilmiyaysan oo aqoon isweydaarsi ah lagusoo bandhigayo e’dhaahda iyo fikradaha curineed ee xubnaha.
Dhiiri galin iyo xogwaran rasmi ah oo looga hadlayay taariikhda halgameed ee haweenka somalida Ogadeniya ku leeyihiin halganka shacabka somalida Ogadeniya. Taariikhda halgameed ee dhulka Somalida Ogadeniya, taariikhda deegaan ee dhulka Somalida Ogadeniya, Nolosha ree guuraaga, Taarikhihi gumeysi iyo waxyaalo badan oo aqoon isweydaarsi ah ayaa lagu soo bandhigay golahan. Golahan oo afka lagu wada hadlayo uu ahaa luqada afka English, maadama oo xubnaha ururku u badnaayeen dad kusoo koray dibada farta somaligana aan aqoon, sidoo kale waxa golahan uu tababaray dhalinyarada oo luqadooda afkooda hooyo qoraal ahaan iyo xikmad ahaanba loogu baray waxaana odhan kara dad badan ayaa ka qalin jabiyay golahaas. Hadaba qoraaladi golahaas soo galay waxaa kamid ah nuqulkan hoose oo looga hadlayo kaalinta haweenka ogadeniya oo xubin kamid ahaa dhalinta qoraalkisa aan kasoo qaatay.
“… Ogaden women are the backbone of our just “HALGAN”. They are the heroines who stand shoulder to shoulder with ONLA. They combine their domestic (household) duties with the physical, moral support they give to the struggle. They are combatants in the ONLA fighting bullets with bullets. They encourage the masses to join the Struggle with their poems/songs etc. They are the highest contributors to the economy…“
Ururka dhalinta Ogadeniya ee UK markiiba waxuu xooga saaray sidii uu kor ugu qaadi lahaa wacyiga bulshada somalida Ogadeniya isaga oo magaca qadiyada Ogaden xooga saaray sidii uu ugaadhsiin lahaa bulshaweynta somaliyeed. Waxuuna markiiba hirgaliyay ruwaayado iyo shirar caalami ah innuu qabto isaga oo ururku kaashanaya ama kaalmo badan ka helaya Jaaliyada Ogadeniya oo ah xarunta ururku hoostagayay.
Mudadii la asaasay Ururka OSF waxaa kadib hirgalay in ururo badan ay ka hirgalaan caalamka ururadaas oo qaatay magaca urur dhalinyarta Ogadeniya. Waxaa Uraradii dhalinyarada ee ka hirgalay wadanka Europe ay ku midoobeen Dallada Ogeden Youth League (OYL) oo lagu asaasay magaalada London laguna dhaqangaliyay magaalada Stokhlom, Sweden. halka ururadii dhalinyarada ee ka sameysmay qaarada America ay ku midobeen dallada Ogaden Youth Network. Iyada oo ay jireen ururo badan oo ka hirgalay qaarada Pacifica sida Australia oo isagu ahaa ururki labaad ee ku xigay OSF ee si rasmi ah u howlgala. Ururadaas faraha badan waxay horseedeen in dallada OYSU ku midobaan iyaga oo lagu hirgaliyay midowgaas OYSU wadanka Denmark sanadkii 2010.
Midowga Ururka dhalinyarada iyo ardeyda Ogadeniya ee OYSU isaga oo mideynaya dhalinyarada caalamka si ay xooggooda iyo maskaxdooda iyo dhaqalahoodaba u mideeyaan waxsoosaarka tayo iyo tiraba ahaana u xoojiyaan.
Hadaba OYSU UK oo ka faa ideysanaysa ahmiyada midowgaas dhalinyarada ayaa dhinacooda kaalintoodi ku aadaneyd kuhowlan sidiii ay ugasoo bixi lahaayeen islamarkaasna uga faa ideysan lahaayeen aqoonta, khibrada iyo kartida faracyada OYSU ee ku bahoobay OYSU.
OYSU UK- ambitions
Ururka dhalinyarta UK ayaa ku howlan waqtigan shaqooyin aad muhiim ugu ah hanaansocodka ururka dhalinyarta iyo qorshayaal ay ku hanweynyihiin inay dhulka iyo shacabka Somalida Ogadeniya ku gaadhsiiyaan Xoriyad. Islamarkaasna kor ugu qaadaan heerka halgan ee shacabka somalida Ogadeniya. qorshayaashaas oo laga aqrin doono Shirweynaha OYSU ee ka bilaabmaya Sandiego.
ONA kala soco Warbixinaha ururka dhalinta OYSU oo faracyo badan taarikhdooda halkan kusoo bandhigi doono.